Dagaalyahan Al-Shabaab ah oo isa soo dhiibay kooxdana cambaareeyey - Sabahionline.com
Dagaalyahan Al-Shabaab ah oo isa soo dhiibay kooxdana cambaareeyey Maarso 23, 2012
Dagaalyahan al-Shabaab ah ayaa isu soo dhiibay madaxda Puntland, isagoo weliba cambaareeyey kooxda mayalka adag, Garowe Online-ta Soomaaliya ayaa Khamiistii (22-ka March) werisay. Qodobbo la xiriira
Faroole: al-Shabaab waxay sii dhex xaluulanayaan buuraleyda Golis
Miino ka qaraxday Mandheera, 4 askari oo ku dhaawacantay
Cabdirashiid Xasan Maxamed ayaa dhaqaalaha u hayey Malleeshiyada Buuraha Golis oo bishii ina dhaaftay shaacisay in ay ku biirtay al-Shabaab.
Madaxda ayaa soo dhaweysay fakashada Maxamed, sida uu isagoo shir jaraa’id ka hadlaya sheegay Wasiir ku Xigeenka Amniga ee Puntland, Cabdijamaal Cusmaan Maxamed. Wasiir ku Xigeenka ayaa ku ceshay ballantii uu qaaday Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo isagu hore u yiri in la cafin doono xubin kasta oo al-Shabaab ah oo isa soo dhiibta. Dawladda Federaalka ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya ayaa iyaduna qaadday ballan middaan la mid ah bishii ina dhaaftay.
Maxamed ayaa warfidiyeennada u sheegay in uu al-Shabaab ka tegay ka dib markii uu aqoonsaday in ay leeyihiin dano qarsoon, Garowe ayaa werisay. Wuxuu xubnaha kale ugu baaqay in ay ka soo baxsadaan kooxda al-Qaacida la xulafada ah oo ay isa soo dhiibaan. Ma jeclaysatay maqaalkan?
August 3, 2012 @ 08:52:13AM
Soomaaliya oo nabad heshaa waxay ka dhigantahay nabad ay helaan dalalka Kenya, Suudaan, Itoobiya, Eritariya iyo dhamaan dalalka afrikaanka ah, ugu dambayntana caalamka oo dhan ayay nabad u tahay.
March 26, 2012 @ 06:45:23AM
Waa ay wanaagsan tahay in tallaabooyin noocaas ah ay hadda soo baxaan. Soomaaliya waa in nabad iyo degenaasho ka jirtaa, ayadoo la fahansiinaya maleeshiyada, " In dagaal uusan hormarinaynin xataa hal iinji oo waddankaasi ah" balse uu u burburinaayo heerka ugu sareeya oo sababi kara in dadka ay dhibaato ku dhacdo. Al-shabaab baraaruga